Kedu ihe ọ bụ, kedu ka ọ si eme na ihe bụ mmetụta nke rimfire | Netwọk Mgbasa Ozi
O doro anya na ị nụtụla banyere ozi ọma na rime. Ọ bụ ọnọdụ ihu igwe nke na-eme mgbe igwe ojii na-agbaze. Ka ihe ngosi a hu gha aghaghi inwe njirimara na ihe ufodu. Dị ka ọ na-adịkarị, oge nwere obere okpomọkụ na ikuku na-adịghị akwụsị akwụsị achọrọ. N’agbanyeghị na ọ bụ ihe gbasara ihu igwe nke na-eme n’ọtụtụ ebe, ndị mmadụ amachaghị.
Ya mere, anyị ga-arara isiokwu a iji gwa gị njirimara niile nke rim na ihe kpatara ya.
1 Gịnị bụ rim
3 Kedu ihe kpatara rim ji eme
Pablo VA - Anyị bụ Palencia
Ọ bụ ihe gbasara ihu igwe nke na-eme mgbe foogu na-ajụ oyi. Mgbe oyi na-adịgide na foogu na-eme site na nnukwu iru mmiri, rime na-emekarị. Ọtụtụ ndị na-ese foto na-eji ụdị ihe a eme ihe na-ese foto na-adọrọ mmasị. Ọ na-apụtakarị na ebe igwe ojii na oke ikuku dị na 0. Na ọnọdụ okpomọkụ ndị a, igirigi dị n'okpuru oyi.
N'oge a bụ mgbe ọkwa mmiri ndị na-ese n'elu ikuku malitere ifriizi na elu mpaghara ahụ. Anyi na-echeta na mmiri choro elu iji kpoo. Ya mere, a chọrọ micron-sized ájá ájá iji rụọ ọrụ dị ka isi condensation hygroscopic. Mgbe ụmụ irighiri mmiri na-amalite ifriizi n'elu, ha na-etolite feathers ma ọ bụ agịga ice dị nro. Nhazi ndị a yitere ka snow mana ha abụghị otu.
Ebe a na-ekwu okwu ntaneti yiri ebe ọzọ snow gbara. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị abịarute elu nke okwute, alaka osisi, epupụta, wdg. Anyị nwere ike ịhụ na obere agịga ndị a na nku dị ka nku nke ice kpuchiri site na igwe ojii. Obodo na obodo Spain nke nwere osimiri di nso bu ndi kacha choo ihe omume a. Ọ bụ otu n’ime ihe kpatara ya Rime na-ewere ọnọdụ mgbe oge oyi na Valladolid ma ọ bụ Burgos.
Ọ bụkwa na osimiri bụ ebe mmiri na-esi na mmiri na gburugburu ebe obibi mgbe niile. Na mgbakwunye, n'ihi mmiri na-asọpụta mgbe niile, ahịhịa dị oke egwu na-etolite nke na-enyere aka idobe iru mmiri gburugburu ebe obibi. Mgbe enwere ihe dị iche na oge ehihie na abalị, ụdị oke ikuku a na-apụtakarị na ekele maka ahịhịa na-ejikarị ya. Ọ bụrụ na ọnọdụ ikuku dị n'okpuru ogo 0, rime nwere ike ịpụta.
Anyị na-ahụ na ozigbo na-eme ihe ahụ, ọ nwere ike ime n'ụzọ ụfọdụ. Ọ bụrụ na hydrometer na-eme na elu na ọnọdụ okpomọkụ na-agbadata na ogo 2 n'okpuru efu na ikuku nke ikuku, anyị na-ahụ na rime na-esi ike na kristal ice na-akpụ n'ụzọ dị iche. Kristal ice ndị a enweghị usoro nhazi dịka ice nke na-eme mgbe enwere snow, mana kama ọ na-emepụta usoro agịga nke na-eto na ntụ ikuku. Ogologo rime ahụ na ọnọdụ ya dị mma, ka akpụrụ mmiri ga-enwe ike ịchịkọta.
Ihe anyị na-ekwesịghị ịghọtahie na rime bụ ntu oyi. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ka ọ na-agbagwoju anya ihe abụọ dị iche iche. Iji mee ka mkpọtụ ahụ mee, ọ dị mkpa na igwe ikuku dị ukwuu na gburugburu ebe obibi. Ntu oyi na-eme mgbe odide nke mmiri n'onwe ya na gburugburu ebe obibi. N'okwu a, ọ dịghị mkpa na enwere ikuku, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na achọrọ otutu iru mmiri na gburugburu ebe obibi.
Rime na-adị ma enwere oke ikuku nke na-echekwa iru mmiri site na gburugburu ebe obibi. Maka nke a, ọ na - abukarị ebe mmiri na ahịhịa jikọtara ya. N'ezie, ọ bụrụ na ọ bụ oge mbụ ị hụrụ rim, ọ nwere ike iju gị anya ma kwuo na ọ nwere ọdịdị ụfọdụ na ihu igwe snow. O doro anya na mgbe rime ahụ gosipụtara na ọ bụ na snow nke dara ada dị omimi. A maara okwu a n'ọtụtụ ebe dị na mpaghara Iberian Peninsula.
Kedu ihe kpatara rim ji eme
Maka ihe omimi ihu igwe a ga-ewere ọnọdụ, ihu igwe dị mkpa dị n'oge oyi, obere okpomọkụ na ụfọdụ ebe ọ na-ejigide oke iru mmiri. Ọ na-adịkarị na mpaghara ugwu ebe enwere osimiri na ahịhịa na ya. A na-akpọkarị ya dị ka ihe nkpuchi ice site na ntu oyi nke umu anumanu ma obu igwe ojii di ala. Enwere ike ịsị na igwe ojii adịghị ihe ọ bụla karịa igwe ojii dị ala na ọkwa elu.
N'ihi na nke a onu iji ebe a ọnọdụ n'okpuru kefriza a chọrọ. Nke a bụ otú e si emepụta nsị ụtụtụ nke ukwuu na ebe ndagwurugwu, karịsịa. Ihe kachasị pụta na ihe a ga - eme bụ oge oyi site na radieshon. Maka nke a, ọ dị mkpa inwe nnukwu ọdịiche dị n'etiti oge ehihie na abalị.
Ọnọdụ ndị dị mkpa maka rumble ahụ ga-eme bụ ihu igwe doro anya, enweghị ikuku, nnukwu ọdịiche dị n'etiti ehihie na abalị yana ọnọdụ okpomọkụ n'oge ụtụtụ dị ala ma ọ bụ dị elu karịa ogo 0. Ọ bụrụ na ndị a niile gburugburu ebe obibi na ọnọdụO nwere ike ịbụ na anyị nwere ụtụtụ ụtụtụ nke ga-agbanwe rime. A na-ahụkarị ya na mpaghara ndagwurugwu nke nwere oke iru mmiri na okpomọkụ dị ala.
Abalị na-ekpo ọkụ n'abalị ga-adị oke ala, oke iru mmiri dịkwa oke elu. Ihu mmiri nke igwe ojii na-ekpuchi ga-adị na ọkwa ala, nke ga-eme ka ọ ghọọ ice mgbe ọ na-ete ya. Ikuku oyi na-agbadata site na mkpọda ugwu ahụ ma na-eme ka iru mmiri dị ukwuu nke na-eme ka e nwee nkịta. Mmiri a dị elu dị elu bụ ihe na-enyere aka inye mmiri dị mkpa maka nhazi nke ụgbụgbọ anụ, nke mechara, na-eme ka mmiri dị n'elu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere rim.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Rumble
Hugo bọọlụ dijo
Ole ole njehie, na ọ dịghị onye na-edezi ihe ndị a?
Zaghachi Hugo Bolas